wiilkii diinka u ekaa
Haylaan, 8 Mar 2014(Alldhooftinle.com)
Dhakhtar Ingiriis Ah Ayaa Sallaxay Dhabarkii Wiilkii Diinka U Ekaa Ee Reer Kolombiya.
Didier Montalvo oo reer Kolombiya ah wuxuu ku dhashay iyadoo hilib weyn oo madow uu dhabarka ka saaran yahay, waxaana markiiba ku dhegtay naanaysta ah Turtle Boy ama Wiilkii Diinka ahaa ama u ekaa. Didier oo qoyskoodu sabool ahaayeen way ku adkaaday inay wax ka qabtaan dhibaatada wiilkooda haysatey. Ugu danbeystii waxaa ogolaaday dhakhtar Ingiriis ah inuu qaliin dhibaato badan ku sameeyo wiilkaa yar. Dhakhtarkaa oo la yiraahdo Mr.Bulstrode wuxuu sheegey inuu ahaa qaliinkii ugu adkaa ee abid soo mara.
Dhakhtar Bultrode wuxuu sheegey in qaliinka uu ku sameeyey Didier ahaa mid aad u howl badan, isla markaana qayb weyn ee jirkiisa ka mid ah saamaynayey. Dhinaca kale waalidka dhalay Didier ayaa sheegey inay ku faraxsan yihiin sida loo daweeyey wiilkooda. Hooyada dhashay willka ayaa sheegtay in dadka magaaladu aanay jecleyn inay la hadlaan iyagoo ka cabsanaya wiilkayga yar inuu jinni yahay.
Maanta wixii ka danbeeya wiilkayga way ka hadhaysaa naanaystii loo bixiyey oo ahayd Diin-la-mood ayay tiri hooyadan oo indhaheeda ilmo ka tireysay. Wiilkan yar oo isaguna saaran dameerkooda ayaa isagoo faraxsan ku celceliyey inuu ka reystay hurda xumadii isla markaana uu hadda wixii ka danbeeya si fiican u kori doono, maadaama culayska dhabarka iga saaraa ii diidey inaan si caadi ah u koro.
Xakiim Bin Jacar Almakhzuumi